Dhulgariir ayaa ku dhuftay oo dilay 7 xadka Turkiga iyo Iiraan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dhulgariir ayaa ku dhuftay oo dilay 7 xadka Turkiga iyo Iiraan
Xarunta kormeerka Dhulgariirka ee Euro-Mediterranean ayaa sheegtay in dhulgariir cabirkiisu yahay 5.7 magnitude uu ku dhuftay aag xadka u dhexeeya Turkiga iyo Iran subaxnimadii hore ee Axadda, halkaas oo ay ku dhinteen dhowr qof.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleiman Soylu ayaa xaqiijiyay in dhulgariirkan oo ka dhacay meel u dhow soohdinta ay la wadaagto Iran ay dileen 7 qof.
In kasta oo xarunta dhul-gariirka Euro-Mediterranean-ka ay tilmaamtay in dhulgariirku uu ahaa mid qotodheer 5km.
Iiraan, sarkaal ayaa u sheegay telefishanka rasmiga ah, “Kooxaha gurmadka ayaa loo diray gobolka. Wali maanaan helin wax warbixin ah oo ku saabsan khasaare ama khasaaro nafeed oo ka dhacay gobolka mana aha deganaan wuxuuna ku yaal gobolka Galbeedka Azerbaijan.”
Iiraan, oo ku taal dariiqyada ciladaha ugu waaweyn, waa mid ka mid ah waddamada ugu nugul dhulgariirka